Waqtiga dhejinta: 10-25-2021
Waqtiga dhejinta: 10-19-2021
Waqtiga dhejinta: 10-12-2021
Waqtiga dhejinta: 09-24-2021
Waqtiga dhejinta: 09-18-2021
Waqtiga dhejinta: 09-13-2021
Waqtiga dhejinta: 09-10-2021
Waqtiga dhejinta: 09-06-2021
Waqtiga dhejinta: 08-30-2021
Maxaan sameeyaa haddii shaashadda LCD -ka ee warshadaha ay tahay mid aan wax ka qabanayn?
Waqtiga dhejinta: 08-28-2021
Marka la isticmaalayo shaashadaha LCD -ka ee warshadaha, waxaa jiri doona waxoogaa guul -darrooyin ah, sida ifafaalaha kartoonnada aan dareenka lahayn. Maxaa keena ifafaalahan? Aynu baranno sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo tallaabooyinka dayactirka shaashadaha LCD -ga warshadaha. Haddii shaashadda taabashadu si tartiib ah uga jawaabto dusha taabashada, waxay ...Akhri wax dheeraad ah »
Taxadarka isticmaalka moduleka bandhigga LCD
Waqtiga dhejinta: 08-18-2021
Taxaddarrada isticmaalka moduleka bandhigga LCD waa sida soo socota: 1. Shaashadda LCD waxay ka samaysan tahay dhalo. Ha dalban naxdin farsamo, sida inaad meel sare ka soo dhacdo. Haddii shaashadu ay waxyeello soo gaarto oo kariska dareeraha ah ee gudaha ahi uu dillaaco, ha u oggolaan inuu afka galo. Haddii ay gasho dhar ama maqaar, dhaq ...Akhri wax dheeraad ah »
Fikradaha iyo Hababka Dayactirka Guddiga Darawalka LCD
Mabda'da wareegga ee guddiga darawalka LCD waa mid aad u dhib badan. Dayactirka maalinlaha ah, dayactirka “heerka guddiga” ayaa guud ahaan la isticmaalaa, laakiin khaladaadka fudud qaarkood, waa in la adeegsadaa dayactirka “chip-level”. Ka dib oo dhan, waa wax laga xumaado in la beddelo guddiga darawalka oo dhan sababtuna tahay ...Akhri wax dheeraad ah »
Ma taqaan farqiga u dhexeeya shaashadda taabashada awoodda leh G+P iyo G+G?
Waqtiga dhejinta: 08-10-2021
Shaashadaha taabashada ee awoodda badan ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshado kala duwan sababtuna waa adkayntooda iyo cimri dhererkooda, xawaaraha jawaabta degdegga ah, keydinta booska, iyo isgaarsiinta habboon. In kasta oo ay dhammaantood yihiin shaashado karti leh, khibradda taabashadu way ka duwan tahay. Tan waxaa u sabab ah adeegsiga shaashadda awoodda leh ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay TFT LCD shaashadda midabka dhabta ah? Waa maxay astaamaha lagu garto?
TFT LCD shaashadda midabka dhabta ah waa semiconductor -ka kasta, pixel kasta waxaa si toos ah loo xakameyn karaa garaaca garaaca, sidaa darteed noodh kasta waa mid madax -bannaan oo ku xirnaan kara xakamaynta, taas oo aan hagaajinayn oo keliya xawaaraha jawaabta muujinta, laakiin sidoo kale si sax ah u xakamayn kara muuji cabirka midabka, ...Akhri wax dheeraad ah »
Ma shaashadda kartida leh ayaa loo adeegsadaa taabashada jirka bini'aadamka?
Waqtiga dhejinta: 08-06-2021
Shaashadaha kartida leh waxay adeegsadaan jirka bini'aadamka si ay u gaaraan taabashada, halka shaashadaha iska caabiya ay adeegsadaan guryaha cadaadiska. Labadaba taabashada iyo adkaanta dushiisa ayaa ka gaar ah iska caabin. Tani waa sababta shaashadaha awoodda leh ay kor ugu kici karaan berri shaashadaha taabashada, waxaana jira sababo gaar ah. Bo ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo kordhiyaa nolosha adeegga shaashadaha taabashada warshadaha?
Waqtiga dhejinta: 08-04-2021
1. U isticmaal badhamada waawayn sida guji guji fudud Jiididda, laba-gujinta, baararka rog-rogga, liiska hoos-u-dhaca, daaqadaha kala duwan ama arrimo kale ayaa ka dhigi doona qaar ka mid ah adeegsadayaasha aan xirfadda lahayn inay dareemaan jahawareer, sidoo kale waxay yareyn doontaa isu-dhowaanshaha isticmaalaha ee badeecadda waxayna yarayn doontaa adeegsi hufnaan. 2. Samee codsigaaga ...Akhri wax dheeraad ah »